Tantaran'ny orinasa - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
"Hanohana hatrany ireo orinasa avy amin'ny firenena rehetra i Sina amin'ny fikarohana ny fahafaha-miasa any Shina amin'ny alàlan'ny sehatra misokatra toa ny Expo," hoy ny filoha Xi Jinping. Shina dia hikitika ny fitomboan'ny varotra iraisam-pirenena ary handray anjara mavitrika amin'ny fitomboan'ny varotra iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana ara-toekarena manerantany. Hanafaingana ny fampandrosoana endrika endrika sy maodely vaovao i Shina, toy ny e-varotra miampita sisintany, mba hampiroboroboana ireo mpamily vaovao amin'ny varotra ivelany. "
Ny tanànan'i Anqiu, faritanin'i Shandong, dia nametraka tamim-pahavitrihana ny fanapaha-kevitra sy ny fandaminana ataon'ny Komity foiben'ny antoko sy ny filankevi-panjakana, manatsara sy mampiorina ny politika sy ny fepetra iraisam-pirenena momba ny varotra, manosika ny "fanatsarana dimy" sy ny "fananganana telo", mamboly endrika vaovao sy maodelin'ny vahiny varotra ary mampiroborobo hatrany ny fampandrosoana avo lenta ny varotra fanondranana. Manoloana ny fihemoran'ny varotra manerantany, ny varotra vahiny any Shina dia nanosika ny fironana ary nahatratra avo lenta tamin'ny resaka fitomboana. Nahavita fandrosoana vaovao izahay amin'ny fiantohana ny fitoniana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny varotra ivelany any Sina.
Eo ambanin'io sehatra politika io, ny Anqiu Agricultural Development Group, orinasam-panjakana ary China Rural Innovation Port Co., Ltd. dia niara-nanorina ny Nongchuanggang Cross Border E-commerce (Weifang) Co. Ltd, fantatra amin'ny anarana hoe NCG. Amin'ny maha tetik'asa lehibe an'ny tanànan'ny Anqiu tamin'ity taona ity, ny NCG dia tsy tetikasa lehibe hanohanana ny vokatra fambolena eo an-toerana ihany, fa ho fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampandrosoana feno ny Tanànan'i Anqiu. Amin'ny maha tsena lehibe ho an'ny vokatra fambolena azy, i Anqiu dia tsy hoe manankarena tongolo maintso, sakamalao, ary karazana legioma manankarena ihany koa. Ny sehatra e-varotra miampita sisintany ao amin'ny Port of Innovation momba ny fambolena dia namboarina manokana ho an'ny sehatra fanondranana tongolo maintso, sakamalao ary legioma, izay vokatra asongadin'ny tanànan'ny Anqiu.
Hatramin'ny niorenany nanomboka ny volana Janoary 2021, teo amin'ireo orinasa fanondranana fambolena sy fiompiana148 ao Anqiu, ankehitriny dia misy 20 amin'izy ireo no niditra tamin'ny sehatra. Ny kinova sinoa ho an'ny sehatra dia efa tamin'ny 7 janoaryfaha, ary ny kinova anglisy dia tamin'ny Internet tamin'ny 17 Janoaryfaha. Eo anelanelan'ny 17 Janoary sy 26 Janoary dia misy fitsidihana 40000 mahery, fivarotana 4 amin'ny totaliny, natokana avy any Korea Selatan, Royaume-Uni, ary Nouvelle-Zélande, miaraka amin'ny totalin'ny $ 678628. Ny baiko avy any Frantsa, Aostralia ary Russia dia eo am-piresahana.